.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Gtalk Chat Box Background Images
Gtalk Chat Box Background Images
Gtalk Chat Theme လေးတွေ လုပ်တုန်းက Chat Box နောက်ခံအတွက် ကျွန်တော် ဖန်တီးထားတဲ့ ပုံလေးတွေပါ။
ပုံလေးတွေ အရုပ်လေးတွေနဲ့ လုပ်ထားတာတွေရော ၊ အရောင်တွေနဲ့ပဲ လုပ်ထားတာတွေရော အားလုံးပေါင်း ၁၂ ပုံပါ။
Gtalk Theme လုပ်နည်းကိုတော့ နောက်ရက်မှ ပို့စ်တစ်ပုဒ် ရေးတင်ပေးပါတော့မယ်။ ဒီပုံလေးတွေကို ဟို အရင်နေ့က
တင်ပေးထားတဲ့ My Theme ဆော့ဝဲလ်နဲ့ အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်နော်..အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ..
ကျွန်တော် လုပ်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေကို သူငယ်ချင်းတို့ အဆင်ပြေသလို ပြန်လည် ပြင်ဆင် အသုံးပြုနိုင်ပါကြောင်း....
Posted by Thurainlin at 10:25
Labels: Gtalk, Photo, Theme